दिल्लीबाट घर नफर्कदैं झलनाथ खनालमाथि अर्को ठूलो बज्रपात ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
दिल्लीबाट घर नफर्कदैं झलनाथ खनालमाथि अर्को ठूलो बज्रपात !
यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचाररत छन् । नेपालले गठन गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा लागेपछि वरिष्ठ नेता खनाललाई अर्को बज्रपात भएको छ । उनको आफनै क्षेत्रका नेतारकार्यकर्ताले साथ छोड्न थालेका छन् । नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नयाँ पार्टी अस्तित्वमा आएपछि नेता–कार्यकर्ताले ‘कित्ता’ स्पष्ट गर्ने क्रममा खनाल निकट नेतारकार्यकर्ता नै ओली पक्षमा लाग्न थालेका हुन।
भारतको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पताल उपचार गराईरहेका नेता खनालले त्यहिवाट आफु नेपाल पक्षमा रहेको जानकारी दिएका थिए। यसरी पार्टीमा विभाजनको संकेत देखिएपछि जिल्ला तहका नेता र स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्षहरु खुलेर खनाल पक्षमा लागेका छैनन्। आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको र पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर अघि बढ्ने उनीहरु वताउँछन्।
नेकपा गठन हुनुअघि तत्कालीन एमालेको जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष रहेका भक्त केसी माधव नेपाल समूहको जिल्लास्तरीय कमिटी गठन हुँदा अध्यक्ष भए। ओलीको कदमविरुद्ध भएका आन्दोलनको नेतृत्व उनैले गरे।
केसी खनालका विश्वासपात्र हुन्। तर, उनी आफू ओलीको ‘रबैया’विरुद्ध रहेपनि पार्टी विभाजन नै अन्तिम विकल्प नभएको बताउँछन्। केसीले पार्टीमा वर्तमान नेतृत्वकै कारण कम्युनिस्ट आचरण समाप्त हुँदै गएको, व्यक्तिवाद र अहंकारले जनताको आधारभूत आवश्यकता नै ओझेलमा पार्ने अवस्था आएको बताए।
खनाललाई इलामबाट पटक–पटक चुनाव जिताएर पठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई र सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदयबहादुर राई माधव नेपालको नयाँ पार्टीतर्फ लागेका छैनन्। उनीहरू अझै पार्टीलाई एक बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन्। सन्दकपुर अध्यक्ष उदयबहादुरले आफू नयाँ दलको पक्षमा रहँदै नरहेको बताए।
‘ओलीले पार्टीलाई धुलिसात बनाए, नवौं महाधिवेशनको निर्देशनविपरित व्यक्तिगत स्वेच्छाचारितामा लगेर विभाजनको अवस्थामा पु¥याए तर, ओलीले त्यसो गरे भन्दैमा पार्टी चोइट्याएर जाने कुरा हुँदै हुँदैन, पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्छ। पार्टी सुधार्नुपर्छ, विभाजन गर्ने होइन’– उनले भने।
इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ ओलीनिकट छन्। प्रदेशसभा सदस्य तथा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर राना, प्रदेशसभा सदस्य काजीमान कागते र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेश बरालले ओलीलाई नै समर्थन गरे। इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेत, उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङ, देउमाई नगर प्रमुख सूर्य पोख्रेल, उपप्रमुख पविमाया राई तथा माई नगर प्रमुख दीपक थेबे र उपप्रमुख विष्णुमाया आचार्य ओलीनिकट मानिन्छन्।
जिसस उपप्रमुख चित्रकला बराइली, सूर्योदय नगर उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराई, चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राई, उपाध्यक्ष निर्मला दाहाल, माईजोगमाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा भट्टराई, सन्दकपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा पराजुली, फाकफोकथुम गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरु राई तथा माङ्सेबुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता योङहाङ पनि ओलीनिकट मानिन्छन्।